Ị nọ ebe a: Home / Okwu Site na Editor / Editorial / Nri Production - Ebee Ka Anyị Na-eche Ihu?
Naanị m sụọ ngọngọ taa na otu n'ime ihe ngosi kachasị mma maka mmepụta nri. ọ bụ ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ jupụtara. Nke a bụ ụfọdụ ozi sitere na ihe ngosi dị ebube:
mmepụta nri zuru oke
ọganihu ndị bi n'ọdịnihu
% nke ala ala eji eme ugbo
nri ahihia: site na ebe na ole
mgbanwe ihu igwe na-emetụta
Kwe m! Ọ ga-aba uru oge ị na-elele ngosi a!
Ịmepụta Ọdịnihu Maka Ọdịnihu: Nchọpụta oge si Institute of World Resources (WRI)
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Editorial Tagged With: nri nri, ọnụ ọgụgụ